Aung Soe - Virus အကြောင်း
Virus အကြောင်း 06/25/2019 8:39am (UTC)
(ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာများအားလုံးသည် သင်ဆရာ မြင်ဆရာများထံမှ လေ့လာကူးယူထားပြီး ကျွုပ်ကိုယ်တိုင် စမ်းသတ်ပြီးမှ တင်ပြပေးထားခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း) aungizzy@gmail.com
အခုတလော သောင်းကြမ်းနေတဲ့ Happy Birthday ဆိုတဲ့အကောင်သတ်နည်းလေးတော့ရှိတယ် နည်းလမ်းပေးနိုင်တယ် ဒါပေမယ့် ဆော့ဝဲ ဘယ်လိုတင်ပေးရမလဲဆိုတာ မသိသေးလို့နောက်မှတင်တော့မယ်။
ဒီနည်းလေး ကVirusတော်တော် များများ ကိုသတ်လို့ ရတဲ့နည်းပါ။ သူငယ်ချင်း တို့အတွက် ဖောက်သည် ချလိုက် ပါတယ်။ ဒီနည်းကိုကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် တွေ့ရှိ ထားတာပါ။ သူငယ်ချင်း တို့လည်း သိရင် သိမှာပါ။ဒီနည်းနဲ့ W32 တို့Win Virus စတဲ့ဟိုအရင်ကVirusတွေတော့ ကောင်းကောင်းနိုင်ပါတယ်။ လွယ်လို့ အထင် မsmall နဲ့နော်၊ တကယ် စွမ်းတယ်။
၁. ကိုယ့်Computer ထဲကို ၀င်နေတဲ့Virus name ကိုသိအောင် လုပ်ပါ။
၂. Virus name ကိုသိရင်တော့Task Manager ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။Process ထဲမှာVirus name ကိုရှာပြီး end task လုပ်လိုက်ပါ။
၃. Search ထဲကနေvirus name ဒါမှမဟုတ်*.exe လို့ရိုက်ထဲ့ ပြီးရှာလိုက်ပါ။Virus name နဲ့Virus လို့ထင်ရတဲ့ .exeတွေကိုDelete လုပ်ပြစ်ပါ။ (Application များကို မှားပြီး ဖြတ်မပြစ် ရန်သတိ ပြုပါ။)
၄. Computer ကို Restart ချလိုက်ပါ။Computerပြန်ပွင့်လာတဲ့အချိန်မှာError massageပြနေပါက (HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows Current Version Run ထဲမှာ Virus name ကိုရှာ ဖြတ်ပါ။)
Safe mode မှ လုပ်လျှင် အဆင့် (၃)မှစတင်လုပ်ပါ။
"Flashy Virus သတ်နည်းလေးပါ"
ခုတလော Flashy ကိုက်နေလို့Flashy ကိုက်နေလို့ဆိုတဲ့ အသံတွေ တော်တော် ကြားနေရတယ်။ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း တော်တော် များများဆိုရင်Format ချပြီးWindowsတောင်ပြန်တင်ကျတယ်။ ဒါပေမယ့်Data Backupတွေကနေ ပြန်ဝင်လာတာပဲ။Antivirus ကိုUpdate လုပ်ပြီး scan လုပ်တော့ မိတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ခြေရာ တွေတော့ ကျန်ခဲ့တယ်။ ဒီပြဿနာမျိုးတွေနဲ့ ကျုံနေတဲ့ သူငယ်ချင်း တွေအတွက်......
၁. Antivirus software တစ်ခုကို သွင်းပါ။
၂. Virus definition ကို update လုပ်ပါ။
၃. Computer ကိုfull scan run ပါ။
၄. ရှာဖွေ တွေ့ရှိတဲ့ Virus နဲ့Trojan များကိုရှင်းပစ်ပါ။ Virus များနဲ့Trojan များကို ရှင်းပြီး သည့်တိုင် Flashy ရဲ့ ခြေရာလက်ရာ များတော့ ကျန်ခဲ့ ဦးမည်။
၅.Internet connection ကိုဖြုတ်ပါ။
၆. Start > Run ထဲတွင်regedit ဟုရိုက် ထဲ့လိုက်ပါ။
၇. Registry Edictor ထဲကိုရောက်သွား ပါမယ်။
၈. HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows CurrentVersion Run သို့ ရောက်အောင် သွားပါ။ ပြီးလျှင် "Flashy Bot"=% System % Flashy.exe ဟူသော စာသား ကိုရွေးပြီး ဖျက်ပါ။
၉. Folder Option ကို ပြန်လည်ဖော်ရန် HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer သို့ရောက်အောင်သွားပါ။"NoFolder Options"="1" ဟူသော စာသားကိုဖျက်လိုက်ပါ။
၁၀.File extension များပျောက် နေတာနဲ့Hiddenဖြစ်နေတာကိုတော့ HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer Advanced ထဲတွင်"HideFile Ext"="1" နှင့်"Hidden"="2" ဟူသော စာသားများကို ဖျက်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် သူငယ်ချင်ရဲ့Computer ကို ဒုခပေးနေတဲ့Flashy အစတောင် ရှာလို့ မရတော့ဘူး။
ထူးရှယ် website များ